Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo tagay magaalada Cadaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo tagay magaalada Cadaado
April 7, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo garoonka diyaaradaha Cadaado kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. [Sawirka: Twitter]
Cadaado-(Puntland Mirror) Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid oo sidoo kale loo yaqaan (Juxa) ayaa maanta oo Jimce ah tagay magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug.
Masuuliyiinta maamulka Galmudug ayaa wasiirka iyo wefdigiisa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cadaado.
Juxa ayaa sheegay in uu Cadaado u yimid sidii uu wadatashi ula yeelan lahaa masuuliyiinta maamulka Galmudug.
Wasiirka ayaa wefdigiisa waxaa ku weheliyay xildhibaano katirsan aqalka sare iyo aqalka hoose ee dalka.
Cadaado ayaa la filayaa in ay dhawaan ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug kadib markii madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed uu iska casilay xilkiisii muddo bil kahor.
June 11, 2017 Ciidamada Puntland oo Buuraha Galgala ku dilay ugu yaraan 25 maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab
Baidoa-(Puntland Mirror) Somalia’s South Western state’s capital, Baido is preparing to host Somali national consultation forum. Speaking with journalists in Baidoa on Tuesday, the President of South West administration, Shareef Hassan Sheikh Adan said the [...]